Ianao ve mila fepetra sy fepetra, ny fiainana manokana sy ny politikam-pisakafoanana? | Martech Zone
Nifandray tanana foana ny fifandraisana sy ny fifanakalozana ara-barotra. Marina izany ankehitriny kokoa noho ny teo aloha, miaraka amin'ny fahazoantsika miditra tsy tapaka amin'ireo fitaovana an-tserasera, na amin'ny solosaina, na takelaka na finday. Vokatr'ity fidirana vetivety ity amin'ny vaovao, ny tranokalan'ny orinasa dia nanjary fitaovana lehibe ho an'ny orinasa hanaterana ny vokatra, serivisy ary kolontsainy amin'ny tsena lehibe kokoa.
Ny tranonkala dia manome hery ny orinasa amin'ny alàlan'ny famelana azy ireo hahatratra sy ho tonga amin'ireo mpanjifa vaovao sy misy amin'ny tsindrio bokotra iray. Raha jerena ny haavon'ny varotra avo lenta eo amin'ny sehatry ny niomerika, ny orinasa dia tokony ho mailo hatrany amin'ny fiarovana ny tombontsoany manoloana ny asan'ny tranonkala. Ny fiarovana ny mpanjifa dia zava-dehibe ihany koa; miaraka amin'ny fandrahonana amin'ny hosoka amin'ny maha-izy azy izay mbola manjaka hatrany amin'ny hetsika an-tserasera, tsy maintsy arovana ihany koa ny fampahalalana tsy miankina ataon'ireo mpampiasa tranonkala.
Tsy mila manao fifanakalozana eo amin'ny filaminana sy ny fiainana manokana isika. Mihevitra aho fa ny teknolojia dia manome antsika ny fahaizana hanana roa. John Poindexter
Ny orinasa dia mety hiteraka fandrika maro raha tsy mandray ny fepetra ilaina izy ireo mba hahazoana antoka fa efa misy ny fiarovana marina, ao anatin'izany ny fizotry ny raharaham-pitsarana (izay mety ho lava, lafo ary manimba ny marika!). Soa ihany, ny orinasa dia afaka mametra ary misoroka tanteraka aza ireo fandrika ireo amin'ny alàlan'ny fananana ny marina fepetra (T & Cs) ary polisy miafinas ao amin'ny tranonkalany. Izy ireo dia handrakotra ny orinasa sy ny mpanjifany mba hahazoana antoka fa ny roa tonta dia afaka mitantana ny raharahany amin'ny tontolo tsy misy olana.
Fiarovana ny orinasanao: Fepetra fampiasana sy fepetra
Ireo pejin-tranonkalan'ny ankamaroan'ny tranonkala dia hampiseho izay fantatra amin'ny hoe fepetra fampiasana, izay manao fifanarahana eo amin'ireo tompona tranokala sy ireo mpampiasa azy. Matetika ny teny toy izany dia ahitana:
The zo sy adidy eo anelanelan'ny tompona sy ny mpampiasa tranokala
Ahoana no tokony hampiasana ny tranokala sy ny atiny
Ahoana ary rahoviana no azo idirana ny tranokala
Any lafy ratsiny ny orinasa dia afaka ary tsy afaka mipoitra raha sendra olana
Na dia tsy takiana amin'ny lalàna henjana aza ny fananana T & C toy izany dia tsara kokoa ny mampiditra teny toy izany mba hanolorana orinasa ho fiarovana tsara indrindra. Ny fisorohana fa tsy ny fanasitranana dia fotokevitra iasan'ny ankamaroan'ny orinasa, noho izany ny fampidirana ireo T & C dia manampy amin'ny antony ara-barotra sy ara-barotra.
Midika izany fa ny fampahalalana amin'ny tranokalanao mifandraika amin'ny orinasa dia tsy misokatra amin'ny fanararaotana ataon'ny mpampiasa (ohatra ny fampidirana atiny tsy nahazoana alalana sy fananganana tsy nahazoana alàlana).
Ny fampidirana ny T & Cs dia famerana ny trosa rehetra mety hatrehin'ny orinasa; ny fananana teny voatonona mazava tsara dia afaka miaro orinasa manohitra ireo mpitsidika tranonkala izay mety maniry ny handray ny andraikitry ny fitsarana amin'ny toe-javatra mampalahelo.
Ny fananana fepetra fampiasana dia manome mazava ho an'ny orinasa sy ny mpampiasa tranokala; ny zon'olombelona sy ny adidy rehetra raisin'ny andaniny na ny ankilany dia ho faritana mazava ary hamela ny roa hanohy amin'ny asany avy.
Fiarovana ny mombamomba ny mpampiasa anao: Cookies sy politika momba ny tsiambaratelo
Tranonkala marobe, indrindra ireo tafiditra amin'ny fividianana na fivarotana entambarotra sy / na serivisy, dia tsy maintsy manangona vaovao sasantsasany momba ny mpanjifany. Ity fanangonana fampahalalana tsy miankina ity dia manasa ny filàn'ny politika tsiambaratelo voalaza mazava tsara, izay (tsy toy ny a fepetra fampiasana fifanarahana) takian'ny lalàna.
Ny politika momba ny tsiambaratelo dia mampahafantatra ny mpampiasa momba ny resaka fiarovana ny angona. Ho tafiditra ao anatin'io politika io ny fomba itondran'ny orinasa ny mombamomba anao izay mety horaisin'ny mpampiasa amin'ny fampiasana ny tranonkalany. Under Fitsipika fiarovana data EU, ny politika dia tsy maintsy apetraka raha manangona antsipiriany ao anaty tranonkala ny anaran'ny mpanjifa, ny adiresy, ny daty nahaterahany, ny antsipirian'ny fandoavam-bola, sns.
Cookies dia ampiasaina hanaraha-maso ny fomba fampiasan'ny mpanjifa tranokala. Io dia ahafahan'ny orinasa manamboatra sy manatsara ny traikefan'ny mpampiasa mifototra amin'ny safidin'ny tsirairay. Ny tranokala dia tsy maintsy misy politika sahaza raha toa ka refesin'izy ireo toy izao ny fampiasan'ny mpitsidika ankoatra ny fanarahana ireto manaraka ireto:
Mampahafantatra ny mpitsidika fa misy ny cookies
Ny fanazavàna ny fiasan'ny cookies dia atao ary ny antony
Fahazoana ny fankatoavan'ny mpampiasa hitahiry cookie ao amin'ny fitaovany
Toy ny Terms sy Conditions, misy tombony ara-barotra mazava ho an'ny orinasa raha manana politikam-baovao mangarahara ao amin'ny tranonkalany:
Ny fepetra sy fepetra dia manampy amin'ny fananganana fifampitokisana sy fifampitokisana eo amin'ny orinasa sy ny mpanjifa
Ny tsy fananana politika mifehy ny fiainana manokana dia manitsakitsaka ny fitsipika ambanin'ny Lalàna fiarovana. Ny orinasa dia mety handoa lamandy mavesatra noho ny fandikan-dalàna, hatramin'ny £ 500,000!
Ny lakilen'ny orinasa sy ny mpitsidika tranonkala raha ny amin'ny tranonkala dia fiarovana aloha! Ny politika sy ny fepetra ary ny fiainana manokana ary ny Cookie amin'ny tranokala dia tokony ho tanjona mazava sy mangarahara, ahafahan'ny orinasa manohy manolotra ny entany sy ny serivisy ary manome ny mpanjifa fomba hampiasa tranokala fandraharahana am-pilaminana. Ny fanazavana fanampiny dia azo jerena ao amin'ny Ny biraon'ny komisera misahana informatika.
Tags: politika cookiehetsika fiarovana ny angonaNy biraon'ny komisera misahana informatikaara-dalànapolitika fiarovana fiainan'olonafepetrafepetra fampiasanafepetra fampiasana